Mapikicha ekukurudzira vhidhiyo yemwaka wechipiri weMythic Quest | Ndinobva mac
Mwaka wekutanga weMythic Quest nhepfenyuro urikubuda paApple TV + yave nemwaka wayo wechipiri yava kuda kusunungurwa. Musi waMay 7, zvitsauko zvitsva zvichatanga uye kubva kuApple ivo vanoda kutiudza kuti isu tave munguva yekuona mwaka wese wekutanga wekurangarira kana kutanga mune ino inonakidza nhevedzano. Vhidhiyo yekusimudzira iyo cheni yakaburitsa haina kutambiswa.
Musi waMay 7, Mythic Quest inotanga mwaka wayo wechipiri. Kune izvi, Apple yakatanga chirongwa chekusimudzira kuburikidza yake yepamutemo YouTube chiteshi. Mariri tinogona kuona vaviri vevatambi vemitambo avo vari chikamu chevateveri venhevedzano, Ashly Burch (Rachel) uye Imani Hakim (Dana) vachiita zvavanoita zvakanyanya. Edza mitambo. Asi panguva ino ivo havaedze mitambo yemavhidhiyo asi chavanoita kuyedza matoyi ehupenyu chaihwo. Vhidhiyo yacho pachayo inonakidza seyakateedzana pachayo, vachiona mashandisiro avanoita kuyedza zvakasiyana zvinoshandiswa kumatoyi akasiyana.
Kupfeka magirazi ekuchengetedza, vaviri vacho vanoedza yega yeiyo matoyi ezvinopfuura kungonakidzwa chete. Chinhu chekutanga chakaedzwa, padhi yebhora, inoedzwa kuti iwedzere uye "kuzvidzivirira." Mimwe mitambo yakaratidzwa inosanganisira iyo yo-yo, juggling, mukombe kurongedza, kurova chibharumu, uye pepa nhabvu.
Mwaka wechipiri wenyaya dzakazosvika uye kunyangwe zvinononoka Nekuda kwemamiriro edenda repasi rose nekuda kwe COVID-19, mhuri iri chikamu chezviteedzana yaifanira kumira kushanda kakawanda nekuda kwekumuka kwezvirwere izvoVamwe vakatouya kuzotaura kuti vaive vasina chokwadi nezvekupfura zviitiko. Asi hei, isu tinopedzisira tave nayo uye sezvatakataura, zvikamu zvitsva zvichatanga muna Chivabvu 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Mapikicha ekukurudzira vhidhiyo yemwaka wechipiri weMythic Quest